अन्तिम संस्कारपछि पूर्वमन्त्रीका बुवामा को’रोना पुष्टि, म’लामी १५ सयजना, को’रोना समुदाय स्तरमै फैलिएको आ’शंका, देशभर खैलाबैला ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/अन्तिम संस्कारपछि पूर्वमन्त्रीका बुवामा को’रोना पुष्टि, म’लामी १५ सयजना, को’रोना समुदाय स्तरमै फैलिएको आ’शंका, देशभर खैलाबैला !
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्‍नेतका पिताको मृ’त्यु को’रोनाबाट भएको पुष्टि भएको छ। यही साउन २२ गते काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उनको नि’धन भएको थियो। तर उनको अन्तिम सं’स्कार भइसकेपछि आज को’रोना पुष्टि भएको हो।
२२ गते मृ’त्युपछि गरिएको स्वाबको रिपोर्ट आज आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्‍वर गौतमले जानकारी दिए।
उनले बाह्रबिसे नगरपालिका-४ का ८४ वर्षीय पुरुषको को’रोनाबाट मृ’त्यु भएको जानकारी उनले दिएका थिए। उपचारका क्रममा तीन दिनसम्म अस्पतालको शिक्षण अस्पतालको आईसीयुमा रहेका बस्नेतको मिर्गौलाको स’मस्याको कारणले मृ’त्यु भएको जानकारी आफन्तले दिएका थिए।
श’व काठमाडौंदेखि बाह्रबिसे
मृगौलाको समस्याका कारण मृ’त्यु भएको अस्पतालले बताएपछि उनको श’व गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे ल्याइएको थियो। धार्मिक परम्पराअनुसार गरिएको अन्त्येष्टिमा १५ सय भन्दा धेरै जना सहभागी भएको बाह्रबिसे नगरपालिका उपप्रमुख सुशीला पाख्रिनले बताइन्।
को’रोनाको रिपोर्ट ढिला आउँदा को’रोना समुदायस्तरमै पुगेको हुनसक्ने उनले बताइन्। ‘उहाँको मृ’त्यु भएको पाँच दिनपछि रिपोर्ट पोजेटिभ आयो’, उनले भनिन्, ‘अस्पतालले बेलैमा ख्याल नगर्दा को’रोना समुदाय स्तरमै पुगेको हुनसक्छ।’ थाहा खबरबाट